कमजोर र प्रयोजनहिन मानिसलाई मार्न कोरोनाभाइरस बनाइएको हो - HongKong Khabar
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ०६, २०७८ समय: २१:५७:३३
अहिलेको विश्व कोरोनामय यसो भनु कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टमय भएकोछ। मास्क , सेनिटाइजर, भौतिक दुरि जस्ता आत्मरक्षक कवचहरु भुत्ते भएकाछ्न। कोभिड महामारीको पहिलो लहरले विश्वव्यापी रूपमा बुढाखाडा र रोगीविरामीलाई सोत्र्याम्मै पार्यो। त्यसपछि भाइरसको उत्परिवर्तित अर्थात म्युटेसनले ल्याएको भेरिएन्टले विभिन्न देशमा मृत्युको आततायी दोस्रो , तेस्रो , चौथो लहर ल्यायो, ल्याइरहेछ, ल्याउनेछ।
भारत र नेपालमा दोस्रो लहरको कारक मानिने भारतीय भेरिएन्टले युवाहरूलाई मारिरहेछ। अब आउने तेस्रो लहरले वालवालिकालाई मार्ने संत्रासपुर्ण आकलन गरिदैछ। यसरी चरणवद्व धर्तीमा काम नलाग्ने ठहरिएका वयोवृद्ध , पिन्डरोगीहरुलाइ छानीछानी सफाया गर्ने उपल्लो दर्जाको चेतना परजीवी भाइरसमा होला त? प्रकृति रचित भाइरसमा यस्तो दिव्य ज्ञान हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य ज्ञानले परिकल्पना गर्न सक्दैन र मान्दैन पनि ।
यस मानेमा संसारको जनसंख्यालाई साइजमा ल्याउन यो भाइरसलाई यो पृथ्वीका संचालक वर्गले आविष्कार गरेको हुन सक्ने कुरामा केहि हद सम्म विश्वास गर्न कर लाग्दै गरेको अवस्था छ अहिले । कतिपय क्लासिफाइड सिक्रेटहरु संसारको सर्वसाधारणजनको पहुचमा कहिल्यै पुग्दैन, पुर्याइदैन, पुरयाउनु हुदैन पनि । पुर्ण सत्यबोधले शाशक र शाशितको सिमारेखालाई सदाका लागि मटियामेट तुल्याइ दिने भएकाले पृथ्वीका नियन्त्रकहरु त्यो च्याप्टरमा ह्युमेनिटिलाइ कहिल्यै लान चाहदैनन् ।
माइन्ड कन्ट्रोलको जन्जिर भित्र मानवतालाई सदावहार दास तुल्याउनु तत बर्गको पहिलो र अन्तिम लक्ष्य हो । अत: कोरोनाभाइरसको अस्तित्वलाई पनि एउटा यस्तै अभेद्य रहस्यको कसौटीमा राखेर पर्यावलोकन गर्दा हाम्रो एन्जाइटी र डिप्रेसनको तह स्वाट्टै घटेर जान्छ नै । र अनावश्यक मानसिक संताप र मृत्यु दर पनि नाटकीय ढंगले घट्न सक्छ। तर चुनाव गर्ने स्वतन्त्रता तपाई हाम्रै हो।
अब यो भाइरसले ल्याएको ताण्डवको परिदृश्यलाइ हेरम।
सार्स- कोभ-२ भाइरस अर्थात चीनको वुहानमा भेटिएको मुल कोरोना भाइरसको १७ वटा परिवर्तित रुप मात्र सक्रिय थियो प्रारम्भमा । र संसारमा अहिले हजार भन्दा बढी कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट अर्थात प्रकारहरु मौलाएकाछ्न।
नेपालमा अहिले तीन किसिमका भेरिएन्ट सक्रिय भएको ठहर छ। ती हुन गत वर्ष २४ तारीख जनवरी २०२० सालमा देखापरेको चीनिया भेरिएन्ट , जनवरी २०२१ मा हङकङको ल्याबमा पत्ता लगाइएको युके भेरिएन्ट जसलाई केन्ट भेरिएन्ट पनि भनिन्छ जो संसारको ५० देशमा फैलिसकेकोछ B.1.1.7 र भारतको महाराष्ट्र राज्यमा अक्टोबर ५ तारीख २०२० सालमा पत्ता लागेको डबल भेरिएन्ट भनेर चिनिने भारतीय भेरिएन्ट B.1.617 को उपगोत्र B.1.617.2 ।
भारतीय भेरिएन्टको मुल गोत्र B.1.617 अन्तर्गत जन्मिएका तीन वटा उप गोत्र छ्न B.1.617.1 (युकेमा गत वर्ष देखा परेको भारतीय भेरिएन्ट), B.1.617.2 ( पहिलो र दोस्रो उपगोत्र भारतमा डिसेम्बर २०२० सालमा पत्ता लागेको हो ) र B.1.617.3 ।
नेपालको विभिन्न ३५ वटा जिल्लाबाट संकलन भएको जिन अनुक्रमको नमूना अध्ययन गर्दा संकलित नमुनाको ९७% प्रतिशतमा भारतीय भेरिएन्ट B.1.617.2 भेटिएको थियो भने बाकी ३ % प्रतिशतमा भारतीय भेरिएन्ट B.1.617.1 भेटिएको थियो ।(१८ मे २०२१)
पहिलाको भेरिएन्टको तुलनामा अहिलेको भारतीय भेरिएन्ट ज्यादै खतरनाक भएको र यो सबै उमेरका मानिसप्रती समान रुपले प्रभावकारी रहेको कुरा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
अहिले वैज्ञानिकहरु भारतमा प्रथमतः भेटिएको भनिएको कोरोना भाइरसको परिवर्तित स्वरुप अर्थात भेरिएन्ट B.1.617 ले कोभिड -१९ महामारीको अर्को विश्वव्यापी लहर ल्याउन कतिको सक्षम छ भन्ने विषयमा अध्यन गर्न थालेकाछ्न। यद्यपि यस भेरिएसनको संक्रमण गति यही स्तरमा रहन्छ वा सुस्त भएर जान्छ आगामी दिनले तय गर्नेछ।
अहिलेको यो भारतीय नश्लको प्रत्यक्ष भयावह प्रभाव भारत र नेपालमा परेको स्पष्ट छ। खोप नलगाएका जनसंख्यालाई संक्रमित तुल्याउन बेलायतसम्म यो नयाँ भाइरस पुगेकोछ।
सार्स-कोभ- २ भाइरस अर्थात कोभिड-१९ रोग निम्त्याउने मुल कोरोना भाइरस भन्दा यो धेरै संक्रामक भएको कुरामा विश्वास गरिन्छ । यद्यपि यसले रोगलाई थप सांघातिक तुल्याउछ अथवा मरण दरलाइ अझ बढाउछ भन्ने तथ्यलाई पुट दिने स्पष्ट प्रमाण भने आउन बाकी नै छ। विज्ञका अनुसार प्रचलित जनस्वास्थ्य मापदण्ड अर्थात मास्क र भौतिक दुरि नै उपलब्ध विकल्प हो जसले यो भाइरस भेरिएन्टलाई फैलनबाट रोक्दछ।
आरम्भमा यो भारतीय भेरिएन्ट B.1.617 भाइरस अक्टोबर ५ तारीख २०२० सालमा भारतको महाराष्ट्र राज्यमा पहिचान भएको हो । अहिलेसम्ममा यो भाइरस कम्तीमा ४४ देशमा फैलिसकेको छ।
यो भाइरस कति संक्रामक छ?
युके र युरोपको हकमा यो जाडो यामबाट यता अति संक्रामक स्वरुपको भाइरसमा युके भेरिएन्ट B.1.1.7 रहदै आएको छ। अमेरिकामा पनि कुल संक्रमण संख्याको तीन चौथाई यही भाइरसबाट संक्रमण हुनेहरु रहेकाछ्न।
गत हप्ता विश्व स्वास्थ संगठनले भारतमा फेला परेको B.1.617 भेरिएन्टलाई सरोकार राख्नु पर्ने भेरिएन्ट भनेर औपचारिक रूपमा वर्गीकरण गरेकोछ। वर्गिकृत कित्तामा परेको यो भाइरसको तीन वटा अरु गोत्रहरु पनि छ्न ।
र ती तीन वटा फरक संस्करणका भाइरसका स्पाइक प्रोटिनको म्युटेसनमा हल्का रूपमा मात्र फरक पाइएको छ।
अघिल्लो चरणको तथ्यांक अनुसार युके र युएस मा बरोबर भेटिने गरिएको भेरिएन्ट बंशको भाइरस भारतीय भेरिएन्ट हो B.1.617.2 जसको संक्रमण क्षमता अतिव उच्च भएको विश्वास गरिएकोछ। मे १३ तारीख बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको विशेषज्ञ टोलिले सार्वजनिक गरेको दस्तावेज अनुसार भारतीय भेरिएन्टको संक्रमण क्षमता युकेमा पहिलो चोटि देखापरेको भेरिएन्ट B.1.1.7 को भन्दा ५० प्रतिशत हुन सक्ने दाबी गरिएको छ।
फ्रेड हचिसन क्यान्सर रिसर्च सेन्टरका इभ्युलुसनरी बायोलोजीका प्रोफेसर ट्रेभोर बेड्फोर्डको मत अनुसार यो B.1.617.2 भेरिएन्ट भाइरसले भारतमा युके भेरिएन्टलाई समेत उछिनेको जस्तो देखिन्छ ।
के भ्याक्सिनले यो भेरिएन्ट भाइरसलाई तह लाउला?
एमोरी युनिभर्सिटीका शोध वैज्ञानिकहरुले भेरिएन्ट भाइरसको यो गोत्र B.1.617.1 लाइ समन गर्ने कार्यमा भ्याक्सिनबाट उत्पादित एन्टिबडी कम प्रभावकारी हुने बताएकाछ्न। मुल भाइरसको निम्ति बनाइएको भ्याक्सिनद्वारा उत्पादित एन्टिबडीले यो नयाँ भेरिएन्टलाइ मुल भाइरसको तुलनामा सात गुना कम रफ्तारमा रोक्ने कुरा शोधक टोलिले बताएको छ। साउथ अफ्रिकी भेरिएन्ट (B.1.351)को संक्रमणलाइ अहिलेको प्रचलित भ्याक्सिनद्वारा बनिने एन्टिबडिले चार गुना कम रफ्तारमा रोक्ने कुरा बताइएकोछ। अफ्रिकी भेरिएन्ट विश्वको २० देशमा फैलिसकेकोछ। ब्राजिल भेरिएन्ट (P.1) विश्वको दस भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ।
नयाँ भेरियन्टलाइ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा तत्कालको लागि भ्याक्सिन कम्जोर प्रतीत भएपनि भ्याक्सिन नै अन्तिम अस्त्र हो भन्ने कुरामा विज्ञहरुको सहमति रहेकोछ।
हालै भएको न्यु इङल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिन कतारका सोधकर्ताले पत्ता लगाए अनुसार फाइजर भ्याक्सिनले सबै स्वरुपका कोरोना भाइरस र यसका भेरिएन्टहरुबाट संक्रमित रोगीहरुमा हुने रोगको गम्भीरता र मृत्युलाई ९७% प्रतिशतको दरले रोक्दछ।
“साउथ अफ्रिकी भेरिएन्टलाई काबुमा राख्ने कुरामा फाइजर भ्याक्सिन एकदम प्रभावकारी सिद्ध भएको कुरा व्यवहारिक तथ्यांकले देखाएको छ। मलाई लाग्छ फाइजर र मोडेर्ना दुबै भ्याक्सिन यी नयाँ भारतीय भेरिएन्ट विरुद्ध लड्न सक्षम छ्न।” किटाणुविद तथा प्रोफेसर सान क्रोटी भन्छ्न।
र अन्तमा यथाशीघ्र संसारको ७० प्रतिशत जनसंख्याले पुर्ण रूपमा सुइ लगाइसके पछि मात्र यो महामारीको प्रकोप नियन्त्रणमा आउन सक्दछ। त्यहाँ सम्म नपुगुन्जेल कमजोर मानिसको वलि हुने क्रम रोकिन्न। कमजोर र प्रयोजनहिन मानिसलाई धर्तीको बोझ हुन नदिन यो बायोसेना (bio warrior) कोरोना भाइरसको रचना गरिएको हो। बस।